Aphikisayo aphumelele ukuyiphula ishoba i-ANC komasipala - Bayede News
Izinyunyana ziyaluhlaba uhlelo olumenyezelwe uMantashe
Imiphumela yokhetho lohulumeni bendawo iyenzile indaba. Lithe liyozilahla konina izolo ngoLwesine kwabe sekuvelile ukuthi imikhandlu eli-18 kuzomele ibuswe ngokubambisana kweleNdlovukazi uMthaniya. Kulemikhandlu kubalwa eThekwini, uMdoni, uMsunduzi, uMuziwabantu, iNkosi Langalibalele, i-Alfred Duma, uMvoti, iNewcastle, iDannhauser, eDumbe, AbaQulusi, uNongoma, uMhlabuyalingana, uMtubatuba, uMhlathuze, eMthonjaneni, Kwadukuza nakwaMaphumulo.
Lesi simo senze amaqembu azimukelwa ngamakhanda njengoba kuzosho ukuthi ukujabula okungaphelele njengoba izivumelwano zingahle zikhombe okunye. Okunye okuzimukisa amakhanda wudaba lokubala kusetshenziswa uhlelo iProportional Represantative okubukeka kuyiyo edide amaqembu amaningi. Isibonelo nje abe-Inkatha Freedom Party (IFP) balale ngoLwesithathu bethi konke kuhamba kahle eHlalankosi, KwaNongoma ngoba bethole amawadi amaningi. Kube ngesifanayo kuNational Freedom Party (NFP) eDumbe. NoMsunduzi kube ngesifanayo lapho uKhongolose ubusuthi uqedile. Nokho kuthe uma sekuqalwa uhlelo lokubala ngePR kwase ukukhuluma kwaba ngokunye.
Imiphumela yePR kanjalo nokuvela kwemikhandlu okumele ibuswe ngokubambisana kwenze amaqembu aqala izinhlelo zokulobolana ukuze akwazi ukwenza imikhandlu. Iqembu elibusayo i-ANC ijube uMnu uJeff Radebe ukuba ahole ithimba labakhongi ukuyoqala izingxoxo namanye amaqembu kuzwelonke. Injolozela ibukeka iKwaZulu-Natal nayilapho izimbangi ze-ANC, Inkatha ithathele kuyo imikhandlu engama-12 okubalwa uLundi, uMsinga, iBig5Hlabisa, uPhongolo, iNquthu, iJozini, iZululand, uMkhanyakude, uMzinyathi, uThukela, INkandla neKing Cetshwayo.
Ubuholi bukazwelonke be-ANC buzohlangana kule mpelasonto ukudingida okungaba ngamaphuzu azophathwa ngabakhongi bubuye bucubungule ngalo muga ovelele iqembu.
Abe ActionSA bona ngaphansi kukaMashaba bathumele abakhongi uDkt uMakhosi Khoza, uNks uVytjie Mentor, uMnu uJohn Moody kanye noMnu u-Abel Tau. Leli qembu ngomlomo kaMashaba alikufihlanga ukuthi impela lingabaqoma bonke kepha hhayi uKhongolose. Ngakolunye uhlangothi abeDemocratic Alliance (DA) bathi ngeke baqome ngakuMashaba. Inkulumo ebide iqhamuka ngeyokuthi abeDA kungenzeka uma sebekwingcindezi bancamele wona uKhongolose noma baqome ukuba yiqembu eliphikisayo kuleyo mikhandlu elingayinqobanga.
Umuntu uyisakhamuzi kuqala
Ubuholi be-IFP buzohlangana nabo ngempelasonto ukudingida ukhetho kanjalo kulindeleke ukuba kuvele namagama abakhongi abazolobolela iqembu. Kuwo wonke amaqembu kubukeka kuzoba ngumqansa ngoba wonke azobe ecwecwa ukuba angaqhamuki nezivumelwano ezidelela isinqumo sabavoti njengoba kube sobala ukuthi kukhona amaqembu abawajezisile nalawo abawaklomelisile.
nguMfo waKwaNomajalimane Nov 5, 2021